काठमाडौं मेडिकल कलेजमा १९९९ मा पीसीआर परीक्षण - ePosttimes
Homeकोरोनाकाठमाडौं मेडिकल कलेजमा १९९९ मा पीसीआर परीक्षण
२९ भाद्र २०७७, सोमबार १७:२१ कोरोना, राष्ट्रिय, समाचार 0
भदौ-२९, काठमाडौं । काठमाडौंको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले १९९९ मा पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको छ । मंगलबार (भोली) बाट लागु हुने गरी उक्त शुल्क निर्धारण गरिएको कलेजले जनाएको छ ।
465800cookie-checkकाठमाडौं मेडिकल कलेजमा १९९९ मा पीसीआर परीक्षणyes
१२०१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ८ सय ५२ जना डिस्चार्ज देशभर १२ सय ४६ काेराेना संक्रमित थपिए चौबीस घण्टामा ४ सय ४५ जना सङ्क्रमित थपिए, ४ सय १४ जना निको भए कोरोना विरुद्धको दशलाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो ३ हजार १ सय ८ जना कोरोना संक्रमित थपिँदा २५ को मृत्यु जोन्सन खोप र चीनको भेरोसेल खोपमा के फरक छ ? उपत्यकामा खुकुलो भयो निषेधाज्ञा : यातायात र पसलसँगै के खुल्यो ? के खुलेन ? तीन हजार ३ सय ९९ परीक्षणमा २ सय ५९ मा सङ्क्रमणको पुष्टि, ५ सय १३ जना निको भएर घर फर्के